PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-09-17 - UNomzamo uzosiza isimame kwi-Essence
UNomzamo uzosiza isimame kwi-Essence
Isolezwe ngeSonto - 2017-09-17 - IZINDABA - DELI MNCWABE
UNGAKAPHELI sikhathi esingakanani isilomo somlingisi nomphathi wezinhlelo uNomzamo Mbatha kade siphethe umlenze we-Essence Festival waseNew Orleans e-USA, manje amehlo aso asethe njo kozoba seThekwini ngesonto elizayo.
UNomzamo uhlelele intsha okuzoyithutha ukuze ifinyelele kalula kulo mcimbi.
“Abanye abantu uma bezwa kukhulunywa nge-Essence, bacabanga umculo nobumnandi kuphela, kodwa akunjalo.
“Ngaphambi kokuba ngihambele i-Essence Festival yaseNew Orleans ngangicabanga kanjalo. Ukuba yingxenye yawo kwangishintsha indlela engibuka ngayo izinto. Ngafunda okuningi nengifisa ukuthi nabanye bafunde kulo mcimbi,” kusho uNomzamo.
UNomzamo uthungatha abesifazane abaneminyaka eqala ku-18 kuya ku-35 nazobaholela ngokuba yingxenye ye-Essence.
Inhloso wukuthi intsha ihlome ngolwazi oluyinsada ngempilo, amathuba emisebenzi, nangokunye okuningi okungathuthukisa impilo yomuntu. Konke lokhu ukwenza ngaphansi kwenkampani yakhe iGround Six & Foundation Lighthouse.
Abazoba senhlanhleni bazoba kulo mcimbi izinsuku ezimbili okungumhlaka 29 no-30.
Kngezithuthukisa impilo, lo mcimbi uzoba namakhonsathi okuzonandisa kuwona abaculi abafana noJill Scott, Joyous Celebration nabanye abaningi.
I-Essence iqala ngoSepthemba 26 iphele ngo-Okthoba 1.
UTHUNGATHA abazoya kwi-Essence
Festival ezoba seThekwini ngasekupheleni kukaSepthemba uNomzamo Mbatha